अब, पत्रकार महासङ्घ उदयपुरमा ‘अध्यक्ष’ को बन्ला ? (लेख) | Purnapusti Khabar
अब, पत्रकार महासङ्घ उदयपुरमा ‘अध्यक्ष’ को बन्ला ? (लेख)
नेपाल पत्रकार महासंघले अवको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि चुनाव मिति तोकिसकेको छ । यहि चैत २५ गते चुनाव हुदैछ । यसपटक पत्रकार महासंघले पुरानो परिपाटीलाई छाडेर प्रत्यक्ष चुनाव गर्दैछ । एकैदिन केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको मतदान गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । हरेक जिल्लामा तीनवटा मतदान पेटिका राखेर केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाको चुनाव सम्पन्न गर्ने तयारी छ । आज साँझ केन्द्रले समग्र चुनावी कार्यक्रम तालिका सार्बजनिक गर्ने र मतदाता नामावलीको अन्तिम विवरण भोलीसम्ममा सार्बजनिक गर्ने बुझिएको छ ।
पत्रकार महासंघ उदयपुर पनि चुनावी तयारीमा रहेसंगै जिल्लामा पत्रकारहरुको चुनावको सर्गमी बढ्दै गएको छ । मुख्य कुरा अव पत्रकार महासंघ उदयपुरको अध्यक्ष को बन्ला भन्ने जिज्ञासा सर्बसाधारण नागरिकहरुमा जिज्ञासा छ भने पत्रकारहरु र पत्रकार संगठनहरु कसलाई बनाउने भन्ने अभ्यासमा जुटिरहेको पाइन्छ ।
अवको अध्यक्ष पत्रकारिता क्षेत्रलाई आत्मसाथ गरेको, बुझेको र निरन्तर लगनशिल भएको र भविष्यमा पनि भइरहने ब्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने आम पत्रकारको मत रहेको छ ।
पत्रकार महासङघ उदयपुरको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा २०४९ सालमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ शाखा उदयपुरको स्थापना भयो । २०४९ सालमा स्थापना हुदाको सस्थापक अध्यक्ष रितुबर्ण पराजुली हुनुहुन्थ्यो । सस्थापक पहिलो अध्यक्ष रितुबर्ण पराजुली कमन्युनिष्ट बिचारधाराको हुनुहुन्थ्यो । उहाँले २०४९ देखि २०५१ सम्म अध्यक्ष भएर काम गर्नुभयो । हाल उहाँ बिराटनगर मोरङमा रहदै आउनुभएको छ । त्यसपछि दोस्रो ब्याक्ति तथा दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल अध्यक्ष २०५१ देखि २०५३ सम्म र २०५३ देखि २०५६ सम्म संस्थापक उपाध्यक्ष कौशल चेम्जोङले अध्यक्षमा नेतृत्व गर्नुभयो । प्रेस चौतारीका चेम्जोङले पहिलो कार्यकाल २०५१ देखि २०५३ सम्म र दोस्रो कार्यकाल २०५३ देखि २०५६ सम्म सम्हाल्नु भयो । पछि उहाँ केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत हुनुभयो ।
त्यसपछि तेस्रो ब्यक्ति अध्यक्षमा प्रेस युनियनबाट श्याम राई हुनुभयो । उहाँ २०५६ देखि २०५८ सम्म र २०५८ देखि २०६१ सम्म दुई कार्यकाल अध्यक्ष हुनुभयो ।त्यसपछी प्रेस चौतारीबाट इश्वर तामाङ अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँ अध्यक्ष हुने चौथो ब्यक्ति हो । अध्यक्ष हुने पाँचौ ब्यक्ति प्रेस चौतातारीबाट अलग भएर स्वतन्त्रबाट महेश्वर चामलिङ अध्यक्ष हुनुभयो । उहाँले २०६४ देखि २०६७ सम्म र २०६७ देखि २०७० सम्म गरी दुई कार्यकाल उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो ।
त्यसपछि अध्यक्ष हुने छैठौ पत्रकारमा कुशलबाबु बस्नेत हुनुहुन्छ । उहाँले २०७० देखि २०७३ सम्म अध्यक्ष भएर नेतृत्व गर्नुभयो । सातौ अध्यक्षको रुपमा हालको कार्यसमितिको नेतृत्व गर्नु भएको पत्रकार भरत खड्का अध्यक्ष हुनुहुन्छ । शाखाकाे दशाैं जिल्ला अधिवेशनबाट उहाँले २०७३ देखि अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आउनु भएको छ । तीनवर्षे कार्यकाल, कोरोनाको कारण सर्दै आउदा एकवर्ष बढि हुन पुगेको छ । चारवर्ष कार्यकाल सम्हालेका अध्यक्ष खड्का नेतृत्वको कार्यसमितिले अव जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ । चुनावी सर्गमी बढेसंगै को अध्यक्ष बन्ला भन्ने जिज्ञासा बढेको छ । कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने अभ्यास संगठनहरुभित्र चलिरहेको छ । कतिपय पत्रकारहरु अहिले पनि संगठन बाहिर बसेर स्वतन्त्ररुपमा पनि प्रस्तुत भईरहेका छन् । उनीहरु पनि अवको अध्यक्ष बनाउने वा चुन्ने अभ्यासमा आफ्नै हिसावले लागिरहेका छन् ।
उदयपुरमा पत्रकारिताको इतिहास हेर्दा संस्थापक अध्यक्ष रितुवर्ण पराजुलीदेखि कौशल चेम्जोङको दुई कार्यकाल, श्याम राईको दुई कार्यकाल र इश्वर तामाङसम्मको नेतृत्व चयन सर्बसहमतिबाट भयो । त्यसपछि महेश्वर चामलिङको दुवै कार्यकाल चुनावी प्रकियाबाट भयो । त्यसपछिको कुशलबाबु बस्नेतको नेतृत्व भने सर्बसहमतिबाट भयो । हालको भरत खड्काको नेतृत्व चुनावी प्रक्रिया भयो । अवको नेतृत्व चुनावी प्रकियाबाट या सर्बसहतिको अभ्यासबाट हुन्छ भन्ने अहिले नै यकिन भएको छैन । पत्रकारहरु चुनावी तयारीदेखि लिएर सर्बसहमतिको अभ्यासमा पनि देखिएका छन् । यसमा उदयपुरका बरिष्ठ तथा अग्रज पत्रकारहरुको भूमिका ठूलो रहन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरको लागि र सिंगो जिल्लाको पत्रकारिता क्षेत्र र पत्रकारहरुको लागि को अध्यक्षले के र कस्तो योगदान, भुमिका खेले भन्ने कुराको चर्चा गरिरहन अहिले आवश्यक छैन तथापी, अवको अध्यक्ष पत्रकारिता क्षेत्रलाई आत्मसाथ गरेको, बुझेको र निरन्तर लगनशिल भएको र भविष्यमा पनि भइरहने ब्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने आम पत्रकारको मत रहेको छ ।
शरिरका अनावश्यक रौंदेखि आँखी भौं आसपासका रौं…